This isaarticle
More by CHYAME KANCHA
nepalese in afgan
fighting for entry to top four
african speaks nepali
BLAST AT UNHCR OFFICE IN NEPAL
sad news for some H1B
This isa<>> article
*** paras says prachanda had3reasons to kill birendra***
BRINGING SPOUSE TO CANADA
KING ADDRESSES THE NATION
too much royalist
who is to be blamed??????
king has no place
you'll enjoy it just watch
Just shut up!!! will you?
अमेरिका मा कमिला कस्तो हुन्छ ?
See more by CHYAME KANCHA
Visitor is reading This isa<>> article
Visitor is looking at Event: Nepal’s New Constitution: Opportunities and Challenges, Bost
Visitor is reading Kehi Nepali Cartoon haru
Visitor is reading Three story house for sell in Itahari
Visitor is reading antaksheri
Visitor is reading Which country has the largest railway network?
Visitor is reading Nepali teenage inventor
Posted on 04-30-09 12:42 PM Reply [Subscribe]
विदेश भ्रमणमा १० करोड
काठमाडौं, माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यले विदेश भ्रमण गरी आठ महिनामा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले उही अवधिमा उस्तै प्रयोजनका लागि गरेकोभन्दा झन्डै दोब्वर खर्च हो ।
गत भदौमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा जारी आर्थिक मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले अत्यधिक विदेश भ्रमण गरेपछि खर्च बढेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको विदेश भ्रमणका निम्ति ६ करोड विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम मन्त्रिपरिषद सदस्य र कर्मचारीले पाँच महिनामै सकाएका थिए । ८ महिनामा विदेश भ्रमण खर्च ५ करोडबाट साढे नौ करोड पुगेको हो । गर्त वर्ष यहीं अवधिमा विदेश भ्रमणका क्रममा साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर अधिकारीले दिए ।
गत वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तिका लागि विदेश भ्रमणका लागि २ करोड छुट्याएकोमा आठ महिनामा एक करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री र विशिष्ठ व्यक्तिका निम्ति विदेश भ्रमण गर्न एक करोडमात्र विनियोजन गरिएकोमा दुई करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
गत वर्ष प्रतिनिधिमण्डल र कर्मचारीका निम्ति ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा आठ महिनामा त्यसबाट ५ करोड ४० लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपालिको बजेटमा प्रतिनिधिमण्डलका लागि ५ करोड मात्र छुट्याइए पनि ७ करोड २२ लाख खर्च भएको हो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिका आठ महिनामा विदेश भ्रमणमा जम्मा नौ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । 'आर्थिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका पालनामा सबै मन्त्रालय र मन्त्री प्रतिबद्ध भए/नभएकाबारे प्रश्न उठेको छ' अर्थ प्रवक्ता अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, 'हामीले रोक्दारोक्दै पनि सोचेभन्दा बढी खर्च भएको छ ।' उनले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका पदाधीकारीचाहिँ विदेश भ्रमण गरी खर्च गर्नेमा पछाडि रहेको बताए ।
सबभन्दा बढी भ्रमण गर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव छन् । विभिन्न मुलुकको भ्रमणबाट उनी र उनको प्रतिनिधिमण्डलले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको स्रोतले बतायो । उनी हाल नर्वेको ट्रोम्सोमा सम्पन्न एउटा सम्मेलन, त्यसपछि क्युवाको हवानामा हुने असंलग्न आन्दोलनको १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन विदेशमा छन् ।
यी दुई देशको भ्रमण सकाएपछि केही युरोपेली मुलुकको भ्रमण गर्ने योजना उनले बनाएका छन् । युरोपेली देशको भ्रमण उनी स्वैच्छाले गर्दैछन् । त्यहाँ उनलाई कुनै आयोजकले कुनै कार्यक्रममा लागि निम्तो दिएका छैनन् । तर, सरकारी खर्चमा उनी युरोपेली देशको भ्रमण गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको प्रतिनिधिमण्डलले करिब साढे दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । फिनल्यान्ड र नर्वेमा भएको उनको हालैको भ्रमणमा झन्डै एक करोड खर्च भएको थियो ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले विदेश भ्रमण र निर्देशिका कार्यान्वयनमा कडाई गरिने बताए पनि विदेश जानेे मन्त्रीका संख्या घटेको छैन । यतिखेर पनि चार मन्त्री विदेश भ्रमणमा छन् । परराष्ट्रमन्त्री यादवसहित स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झा, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र वनमन्त्री किरण गुरुङ यतिबेला विदेशमा छन् । उनीहरू सबै सरकारी खर्चमा विदेश गएका हुन् । झा मलेसिया, गुरुङ अमेरिका र पोखरेल चीनमा छन् ।
Posted on: 2009-04-29 20:09:02